ရူးခါသွားလောက်အောင် စားလို့ကောင်းတဲ့ အသားစုံပေါက်စီ ? – FoodiesNavi
By yin sandi On August 9, 2018 0
စားနေကျတွေရိုးအီနေပြီဆိုတော့ အသစ်အဆန်းလေးတွေရှာဖွေရင်း မင်မင့်လျှာအာရုံကိုနိုးထလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အသားစုံပေါက်စီလေးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အသားစုံပေါက်စီဆိုတာက WYTU ကျောင်းကန်တင်းမှာ အရမ်းဟော့ခဲ့တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါနော်။ အသားစုံပေါက်စီကိုကြားဖူးတာကြာခဲ့ပေမယ့် လှိုင်သာယာကျောင်းမှာပဲရောင်းတာကြားဖူးတော့ စမ်းမစားကြည့်ခဲ့ဖူးဘူးရယ်။ အခုတော့ စမ်းချောင်းထဲမှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ” Foo-D” ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာ အသားစုံပေါက်စီရတယ်ကြားလို့ အပြေးလေးသွားစားကြည့်လိုက်တာ မထင်ထားလောက်အောင် ကြွေဆင်းသွားမိလို့ အသားစုံပေါက်စီရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်း လက်တို့ပေးမယ်နော်။
အသားစုံပေါက်စီဆိုတာက ပုံမှန်စားနေကျပေါက်စီအရွယ်ထက် သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပိုကြီးပြီး အမိုးဖွင့်ထားတဲ့ပေါက်စီလေးကို ဆော့စ်လေးတွေဆမ်းပေးထားတာပါ။ စစချင်းအမြင်မှာတော့ သိပ်မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးရယ်။ အပေါ်ယံနေရာကနေ တူလေးနဲ့ဖောက်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါမှ ပွင့်အန်ထွက်ကျလာတဲ့ အသားတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးကိုမြင်တော့မှ ဟာခနဲ ? ဟင်ခနဲတွေ ? တွေဖြစ်ပြီး သွားရည်တွေထိန်းမရသိမ်းမရဖြစ်သွားမှာ ကိုယ့်လူ ? တူလေးနဲ့ထိုးဆွကြည့်တွေ စားချင်စရာကောင်းလေပဲ။ ပေါက်စီအပြင်သားကိုတော့ ကြက်ဥ၊ အတွင်းဘက်ကို မုန်ညင်းရွက်နဲ့ ကာရန်ထားပြီး တကယ့်အနှစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ ကြက်သား ၊ ဝက်သား ၊ ပုဇွန် ၊ ပြည်ကြီးငါး ၊ ဆေးဘဲဥ ၊ ငုံးဥတွေနဲ့ မုန်လာဥနီ၊ ပဲသီးတွေကို ဆော့စ်ချိုချဉ်အရသာလေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပေးထားတော့ ခံတွင်းတွေ့ချက်ပဲ ? ။ တစ်ပွဲကို(၂)ယောက်လောက် အဝဆွဲလို့ရတယ်။ တစ်ပွဲငကို(၅၀၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ အသားတွေနဲ့တင်တကယ်ကိုတန်တာ။ စားဖူးသွားရင် မင်မင်ပြောတာ လိုတောင်လိုသေးတယ်လို့ပြောမှာသေချာတယ် ? ။
Foo-D မှာ တခြားမီးနူးတော်တော်များများလည်းရနိုင်ပေမယ့် မင်မင်ထပ်စားခဲ့တာတွေကတော့ မာလာရှမ်းကော ၊ ငါးပေါင်းကင် ၊ ဝက်သားချဉ်စပ်သုပ် ၊ အပ်မှိုတန်ပူရာ ၊ သီးစုံဒိန်ချဉ် ၊ ထောပတ်သီးဖျော်ရည်တွေပါ။ မာလာရှမ်းကာလေးက ကြက်ဥ ၊ ပုဇွန်နဲ့အသားနည်းနည်းပါတယ် ။ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ကိုရီးယားထုံချိုင်းကင်လေးတွေကိုသုံးထားတယ်။ တစ်ယောက်ကိုအဝအပြဲစားလို့ရတော့ (၄၅၀၀)ကျပ်နဲ့တန်တယ်ပြောရမယ်။ အထုံ ၊ အစပ်လုံးဝအနေတော်ပဲ။ အရသာစိမ့်ဝင်မှုလေးလည်းကောင်းတယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တော့ တကယ့်ကိုကျေနပ်စရာအရသာမျိုးရတယ်။
ငါးပေါင်းကင်ကတော့ တော်တော်ကြီးအစပ်အဟပ်တည့်တယ်။ ငါးအသားလွှာကကြွပ်ကြွပ်အိအိလေးဖြစ်နေပြီး ချဉ်ငံစပ်အနှစ်လေးတွေစိမ့်ဝင်နေတော့ အရသာကလုံးဝရှယ်ပဲ။ အနှစ်ကလည်းအရသာလုံးဝမလေးဘူး ။ ခဲပတ်ပြီးကင်ထားတော့တူးမှာဘာညာလည်းမကြောက်ရဘူး ။ ငါးပေါင်းအရသာရော ငါးကင်အရသာပါပေါင်းစပ်ခံစားရတော့ တကယ်ကိုလျှာလည်သွားတာပဲ။ ဈေးကလည်း(၄၅၀၀)ကျပ်ပဲပေးရပြီး ငါးအကြီးကြီးရတယ်ရယ်။ ထမင်းလေးကိုအနှစ်လေးဆမ်းပြီး ငါးအသားလွှာလေးကို မြုပ်ပြီးစားလိုက်ရင် ရှယ်တွေခံတွင်းတွေ့သွားမှာအသေအချာပဲ။
ဝက်သားချဉ်စပ်သုပ်ကတော့ သိပ်မထူးခြားဘူးရယ်။ အဆီမပါဘဲ အသားတွေချည်းထည့်ပေးတာတော့ တော်တော်ကျေနပ်မိတယ်။ အရသာကတော့ ပေါ့လွန်းတယ်။ သိပ်စိတ်တိုင်းမကျဘူးရယ်။
သီးစုံဒိန်ချဉ်လေးလည်းမဆိုးဘူး ။ အစာတွေများသွားလို့အီနောက်နေချိန်ဆို ဒါလေးကပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းပဲ။ အသီးလေးတွေထည့်ထားတာလည်းတော်တော်လေးစုံတယ်။
အပ်မှိုတန်ပူရာကတော့ မွမွလေးနဲ့အရသာအစပ်အဟပ်တည့်တယ်။ Sauce ကိုတော့သိပ်သဘောမကျဘူး။ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘဲ တန်ပူရာလေးနဲ့ယှဉ်တွဲမိဖို့တော့ လိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်။
အစားတစ်လိုင်းတို့သွားစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အသားစုံပေါက်စီနဲ့ ငါးပေါင်းကင်လေးကို Try ကြည့်စေချင်တယ်။ လုံးဝအရွေးမမှားစေရဘူး။ အရသာကမက်မောမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာ အသေအချာပဲ။ Foo-D ကိုသွားစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဗားကရာလမ်းမပေါ်ကသွားရင် ရွှေမန်းမှတ်တိုင်နဲ့ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်ကြားလောက်က အရှေ့ကုန်းလမ်းထဲမှာပါ။ ဗားကရာဘက်ကဝင်ရင် သိပ်မဝင်ရဘူး။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းလေးမှာပါ။ အရသာလည်းကောင်း ဈေးလည်းတန်တဲ့ဆိုင်လေးမို့ ခြေတလှမ်းနောက်မကျရအောင် မြန်မြန်လေးဒိုးလိုက်တော့နော်။
In Reviews Tagged dumpling, mala shan kaw Leaveacomment